Trendsetters amin'ny fizahan-tany eran-tany: programa WTTC Summit ho an'i Cancun
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Trendsetters amin'ny fizahan-tany eran-tany: programa WTTC Summit ho an'i Cancun
Manoloana izay mety rehetra hitranga dia hiatrika ny fihaonana an-tampony manerantany any Cancun Mexico amin'ity volana ity ny World Travel and Tourism Council (WTTC). Ity hetsika ity dia mpiorina amin'ny fironana, izay hiarahan'ny mpitondra ambony voalohany, aorian'ny fipoahan'ny COVID.
Ny World Travel and Tourism Council (WTTC) dia nanome topy maso ny fandaharan'asa feno hetsika ao amin'ny Fihaonamben'ny Fizahan-tany isan-taona eran-tany any Cancun, Mexico, ny 26 aprily sy 27 aprily 2021.
Tambajotra fizahan-tany manerantany ny mpikambana dia afaka mifandray amin'ny saika amin'ity hetsika fametrahana fironana mivantana mivantana ao amin'ny Tranonkala World Tourism Network. Ny mpikambana WTN dia afaka miresaka momba ny olana ao amin'ny WTN Member WhatsApp sy Linkedin Group.
Jereo hoe iza no ao Cancun, iza no hiteny, ary inona ny lohahevitra hanokafana an'izao tontolo izao amin'ny fomba vaovao amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Miara-miasa amin'ny WTTC sy WTN, eTurboNews mivantana mivantana ny hetsika amin'ny sehatra rehetra ao anatin'izany eTurboNews.com ary livestream.travel amin'ny April 26 sy 27.
Juergen Steinmetz, izay filoha sy mpanorina ny World Tourism Network (WTN) ary koa mpanonta eTurboNews, hanatrika ity fihaonambe manan-danja ao Cancun ity. Ny mpikambana WTN ara-batana amin'ny Vovonana Cancun dia asaina ho tafiditra ao anatin'ny fandrakofana mivantana. Ny mpikambana WTN rehetra dia afaka maneho hevitra sy mifanakalo hevitra momba ny olana ao amin'ny vondrona WhatsApp sy Linkedin irery ihany. Mba hahatongavana ho mpikambana WTN, mankanesa any www.tw.travel/register
Tsindrio ny pejy manaraka raha te hahalala bebe kokoa momba ny fihaonambe WTTC ho avy, ny programa ary ireo mpandray anjara.